Kutheni Us - Mandarin Morning Chinese School
Le ulwimi olucacileyo kunye mandulo of China: Mandarin. Ukuphulaphula kwincoko yaseTshayina yona injengokungathi amazwi bephulaphule, ngaxeshanye zivuse uthotho iimposiso ezimfutshane ukuba abonakale phambi kwamehlo akho. Akukho nto, kunye Han wayo Zi (Chinese Okushicilelweyo), abalinganiswa ezithi zonke zivela imifanekiso, ukubalisa amabali ezizezabo! Abo oonobumba Chinese liqulunqe ulwimi ngoxa ngexesha elinye yivumele ukuba bhetyebhetye enkulu, eninika ikhono lokubonisa wena ngokuchanekileyo ngamandla. Kwaye akukho Yiloo nto zigxininisa ukubaluleka kwezakhono zokuphulaphula ezaneleyo, njengoko inyanzelekile ukuba ukufunda ukunxibelelana ngendlela eqhelekileyo ukuze Chinese izakhono emanyelwayo.
Yethu-ngendlu yenzelwe 1-2-3 Learning Cycle uyakuqonda ngokupheleleyo ezi kunye nezinye nemiba engundoqo neyintsusa ulwimi Chinese. Thina ukubola ulwimi ukuze ubone uze uqonde undoqo kwayo, kwangaxeshanye, siqala nje ukuyisebenzisa. Kwaye ukuba onjengawe wafunda ulwimi lwakho lwenkobe, apho usebenzisa nokuqonda go isandla ngesandla?
EAST Uhlangana WEST
"Mfundisi, yintoni na l ogic ka Mandarin ? Bonke abo imithetho wena kum, benza intloko ejikelezayo yam! Ukuba kuphela uchaze kum ingqiqo yayo, bendiya kuba kakuhle phambi kokuba uyazi! "
Ewe, Kwakubonakala ukuba iindlela zokufundisa ezisetyenziswayo, yokuzithenga ukuvala umsantsa phakathi (non-Chinese) yokucinga Western kunye neengcinga Chinese, phakathi kweelwimi eNtshona Mandarin. Endaweni ngumnikelo ukuqonda, imithetho yayisenziwa, yaye eminye imithetho.
Ukwenza ubomi Mandarin lula kubafundi iqela lethu weza indlela entsha ebizwa Slow Motion Technique . Slow motion ubuchule okunene ekubonisa ingqiqo Mandarin, kwaye okona kubaluleke kakhulu, siyakufundisa isiMandarin nje ulawulo ENYE endaweni abaninzi, yaye apho umfundi angathanda oko?
Kukho izinto awayefuna ubusazi ngaphambili, kakuhle Slow Motion Technique kum ngomnye wabo. Ndiya Ndiyathemba uya kukufumanisa njengento eluncedo njengoko wenzayo ngelo xesha!
It is Ngumnqophiso lethu ukuba ukusasaza ulwimi ezintle Chinese ngokukhulula abafundi bethu umgangatho ophezulu yokufundisa kunokwenzeka, nokuba namabhongo kwabo, imvelaphi okanye ubudala, yaye naphi na.
Ukuze ukwazi ukwenza njalo siye wacela titshala baza umbono wethu yokufundisa ikhethekileyo, ivelisa iziphumo ngaphaya kuni kuba kulindelelekile.
Ngokusekelwe umbono wethu iimpawu zethu eziphambili zezi zilandelayo.
Mandarin Morning indlela
2 1 no 2 dibanisa 1 Curriculum
Curriculum yethu ulufikelele usukelo lwakho ukufunda Mandarin, lo gama ngaxeshanye ulungiselela ukuba bapase iimviwo Chinese
izifundo ezongezelelweyo eziyimfuneko ukulungiselela iimviwo
Clever Learning, esebenzisa motion Technique yethu Slow
Motion Technique yethu Slow ityhila engundoqo okwenyaniso Mandarin, leyo kuyenza isantya yokufunda yakho kakhulu
Undoqo Mandarin ayivezi
Lula ukuba ukhumbule, esebenzisa Isakhiwo Map yethu
Thina ukubola ulwimi Chinese kwinani iibhloko ezibalulekileyo zokwakha. Oku kwenza kube lula ukuqonda yaye ngenxa yoko kulula ukuba uyikhumbule
Abambe nje ngokuba iphindaphindwe
FUN Ukusebenzisa, iba Ulwazi yakho ibe Skill ngeendlela ezininzi yokwenza
Imidlalo, umculo, izibongo, imifanekiso eshukumayo, imisebenzi EA. yilani yinxalenye ebalulekileyo indlela yethu, hayi kuphela ngexesha izifundo zethu kodwa off kwidyunivesi emva kokuphumelela
Enye indlela abaqhuba: sebenzisa iincwadi kuphela
indlela yokufundisa zifane
Mandarin Morning indlela yokufundisa kusetyenziswa ngabo bonke ootitshala ukuze kukhuselwe umgangatho wokufundisa
indlela yokufundisa kuxhomekeke ootitshala: Ootitshala ezahlukeneyo usebenzise indlela eyahlukileyo
ngcono kwikharityhulam Ukuqhubeka
Ngokusekelwe kumava ekhulayo impendulo yomfundi 's nootitshala sifuna ukuphucula izifundo zethu usebenzisa ISICWANGCISO-DO-kweakhawunti-ACT cycle
Akukho ukuphuculwa kwekharityhulam pro-active
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga isikolo sethu neenkqubo zethu, cofa iqhosha ngezantsi uze uqhagamshelane nathi!